युवाविहिन गाउँ, रोपाइँ गर्न पनि समस्या
बर्दिबास, ३० असार । ‘धान रोप्न कामदार पाइँदैन । ट्र्याक्टरको जोताई त्यतिकै महँगो छ । मल पाउन मुस्किल भयो’, धान रोपाइँका लागि ब्याडमा बीउ उखेल्दै गरेका बर्दिबासका विष्णु फुयाँलले भने, ‘दश कठ्ठामा ...
राजधानीबारे प्रदेशसभामा छलफल नगर्न अादेश
मकवानपुर, ३० असार । उच्च अदालत इजलास हेटौंडाले प्रदेश नम्बर ३ को स्थायी राजधानीबारे प्रदेशसभामा छलफल गर्न रोक लगाएको छ । उच्च अदालत हेटौंडाका न्ययायाधीश चिन्तामणी बरालको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको ...
जानकी मन्दिरमा विद्युतीय सौन्दर्यकरण
जानकी मन्दिरलाई आधुनिक किसिमले सौन्दर्यकरण गर्नका लागि रु पाँच करोडको लागतमा विद्युतीकरण गरिने भएको छ । सोमबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को आर्थिक सहयोग र डिजाइनको आधारमा मन्दिर विद्युतीकरण गर्ने सम्झौता ...
अझै २२ लाख नागरिक भूमिहीन
काठमाडौँ, २६ असार । नेपालमा अझै २२ लाख नागरिक भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । समाचार अनुसार, भूमि नीति बनेको ५४ वर्ष बितिसक्दा पनि ती भूमिहीनले भूमि पाउन सकेका छैनन् ...
सुन तस्करी र हत्या प्रकरणः गोरेका सहयोगीसहित तीनजना जेल चलान
काठमाडौँ, २६ असार । संंगठित अपराध, सुनकारी र सनम शाक्य हत्या मुद्धाका थप तीन अभियुक्तलाई जिल्ला अदालत मोरङले सोमबार पुर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । अरु तीनजनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश ...
‘पुर्ण न्याय नपाई अनशन तोड्दिन’
काठमाडौँ, २६ असार । छोराका हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै ४६ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेकी गंगामाया अधिकारीले पूर्ण न्याय नमिलेसम्म अनशन नतोड्ने बताएकी छन् । हत्याका मुख्य आरोपीमध्येका एक छविलाल पौडेलले ...
कौडीको भाउमा ट्रस्टको सम्पत्ति
काठमाडौं, २५ असार । दुई महिनाअघि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले ताहाचलस्थित छाउनी मार्गमा रहेको १५ रोपनी जिग्गा खाली गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणालाई पत्रचार गर्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ट्रस्टको नाम रहेको ...
सहसचिव-उपसचिवमा अब खुलाबाट भिड्न नपाईने
काठमाडौं, २५ असार । निजामती सेवाका सहसचिव र उपसचिव पदमा अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न नपाइने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा सहसचिव–उपसचिवमा खुला प्रतिस्वपर्धाको ...
धर्म प्रचार गरेको आरोपमा फिलिपिनीलाई देश निकाला
काठमाडौं, २५ असार । गृह मन्त्रालयले व्यावासायिक प्रवेशाज्ञा बिजनेस भिसाको आडमा चर्च चलाएर धर्म प्रचारमा संलग्न फिलिपिनी दम्पतीलाई एक वर्ष नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाई निष्काशन डिपोर्ट गरेको छ। व्यावसायिक भिसा लिएका केही विदेशी ...
असारे बजेटमा ‘चीन घुम्ने’ रहर !
काठमाडौँ, २४ असार । आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका ५ पदाधिकारीसहित करिव एक दर्जन व्यक्तिको चीन भ्रमण प्रस्ताव वन मन्त्रालय पुगेको छ । बजेट सक्ने उदेश्यले समितिका ...
गाउँपालिकाका अध्यक्षले कुटे कर्मचारी !
काठमाडौँ, २४ असार । शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन मन नपरेपछि गाउँपालिका अध्यक्षले प्रतिवेदन तयार पार्ने कर्मचारीलाई कार्यालयमै कुटपिट गरेका छन् । जाजरकोट कुसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले शुक्रबार शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका स्रोतव्यक्ति कमल ...
यस्तो बन्दै छ प्रहरीको संघीय संरचना
काठमाडौँ, २४ असार । गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। करिब दुई महिनाको गृहकार्यपछि मस्यौदा तयार भएको हो। नेपाल प्रहरीमा सधैं विवादको विषय बन्ने गरेको ३० वर्षे सेवा अवधि ...
सवारी दुर्घटनाः १० वर्षमा १० हजारभन्दा बढीको मृत्यू
काठमाडौं, २३ असार । सवारी दुर्घटनामा पछिल्ला पाँच वर्षमा देशभर १० हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष दुई हजार सर्वसाधारणको ज्यान दुर्घटनामै जाने गरेको छ । यो संख्या ...
काठमाडाैं, २३ असार । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सुशासनका सवालमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउने घोषणा गरेको सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीले नै बहुचर्चित घोटाला प्रकरणका मुख्य आरोपीलाई नै विज्ञ नियुक्त ...
पारवहन सम्झौता गर्न चीन जाँदै नेपाली टोली
काठमाडौं, २३ असार । चीन सरकारसँगको व्यापार तथा पारवहान सम्झौता अघि बढाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे नेतृत्वको टोली आइतबार चीन प्रस्थान गर्दैछ। टोलीमा परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, भौतिक ...
कमला नदीमा फसेका सबैको सकुशल उद्धार
ड्रग्स दिएर मेरो यौन शोषण गरियो
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइँदा केही हास्य दृश्य देखिएको थियो। मंगलबार अपराह्न जिल्ला अदालत काठमाडौं पुर्याइएका महराको बयानपछि म्याद थप गर्न न्यायाधीश दीपककुमार दाहालको इजलास ...
काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललित निवासको जग्गासम्बन्धी दुईवटा मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रमाण र कागजात नझिकाई गरेका फैसला शंकाको घेरामा परेका कान्तिपुरमा खबर छ । ललिता निवासको २९९ रोपनी सरकारी जग्गाको गैरकानुनी दर्तासम्बन्धी विवाद जोडिएका ...